Dzidza Nesu - Prairie Cardiovascular
Dzidza Kubva kuVatungamiriri Muhutano hweMwoyo
Shandura matekiniki ako kusvika padanho rinodiwa kuti utarisire varwere vakanyanya kuomarara vevascular
Zvichienderana nehukuru hutsva hwakaitwa nevanorapa chirwere chemoyo, kufambira mberi kukuru kwakaitwa vachishandisa nzira dze endovascular mukurapa kwevascular uye structural heart disease. Kunyangwe varapi vazhinji vemoyo nemoyo vaine hunyanzvi hwekuita maitiro aya, zvinoita sekunge pasina nzira yakakwana iyo varapi ava vanogona kuwana kudzidziswa kwepamusoro kunodiwa kuti vashandure hunyanzvi hwavo kusvika padanho rinodiwa kutarisira varwere vane vascular yakaoma.
VanaChiremba kuPrairie Cardiovascular vanoramba vachiisa nhanho mundima idzi netsvagurudzo yehunyanzvi uye dzidzo yechiremba inoenderera. Kwemakore akawanda fakaroti yedu yakatora chikamu mukudzidzisa vamwe vanachiremba muminda yevascular uye endovascular mushonga. Tiri kuramba tichiona kudiwa kusingakwane kwekudzidziswa kwachiremba muminda iyi pamwe neStructural Heart Disease. Mukuedza kuzadzisa ichi chinodiwa, takagadzira chirongwa chekudzidziswa kwakawanda kwevanachiremba kukudziridza hunyanzvi hwepamusoro muminda yeVascular Medicine, Endovascular Medicine, Structural Heart Disease uye Coronary Chronic Total Occlusions.
Vana chiremba vanogona kunyorera mwedzi mumwe kusvika kumitanhatu yekudzidziswa zvinzvimbo. Kune varapi vanokwanisa kuzvipira gore rose kudzidzo yavo yepamusoro tinoramba tichigamuchira zvikumbiro zvechinzvimbo chimwe kutanga muna Chikunguru wega wega.
Kusanganisira non-invasive vascular imaging
Kusanganisira TAVR, Mitra-Clip, uye Watchman
Kusanganisira AAA uye ese ari maviri epamusoro uye akaderera peripheral kupindira
Kudzidziswa mune yakaoma chisingaperi coronary yakazara occlusion kupindira
Mapiyona muutsva uye kusimudzira maitiro matsva ekuongorora uye ekurapa, vese varapi vePrairie Vascular vaongorori vanoshanda mumakiriniki akawanda miedzo, vachipa vamwe vedu ruzivo rwekutanga-ruvoko nemidziyo mitsva.
"Iyo Yepamusoro Mwoyo uye Vascular Fellowship kuPrairie chiitiko chinoshamisa uye yakasarudzika chirongwa chemhando dzakasiyana-siyana pane imwe yepamusoro-soro mapurogiramu ekupindira munyika yose ..."
- Vikas Agarwal, MD (Akapedza kudzidza)
"Ini ndinokurudzira zvikuru iyo Prairie Fellowship kune chero Interventional Cardiologist iri kutsvaga kusimudzira hunyanzvi hwavo nebasa. Pakutanga ndaitya kutora sabata kubva kukiriniki yangu ichangotanga asi mukupedzisira, ndinofara kuti ndakaenda kuPrairie…
"Munguva pfupi yapfuura ndakava nemukana wekudzidzisa kwemwedzi mishanu kuPrairie Heart Institute uye Prairie Cardiovascular Consultants, Ltd. muPrairie Vascular Fellowship Program. Chiitiko ichi chaive chakasarudzika pamatanho akawanda…
- Edward O'Leary MD, MD (Akapedza kudzidza)